Lufthansa Anabataghị Ndị Nnọchi Anya
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Lufthansa Anabataghị Ndị Nnọchi Anya
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • LGBTQ • News • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Lufthansa anaghị anabata ndị nwanyị na ndị nwanyị ọzọ
Lufthansa ga - echi “ndị nwanyị na ndị nwanyị” ọdịnala ndị na-ekele ndị njem maka ọdịmma nke nwoke na nwanyị na-anọpụ iche dịka 'ndị ọbịa a hụrụ n'anya,' ma ọ bụ 'ụtụtụ na mgbede.'
A ga-enye ndị njem Lufthansa nhọrọ okike nke atọ n'oge usoro ntinye akwụkwọ.
Lufthansa bụ onye kachasị ụgbọ elu ụgbọ elu kachasị ọhụrụ ịkpọsa 'mgbanwe' dị otú ahụ, na-esonyere Air Canada na Japan Airlines.
Onye nkwuchiteọnụ Lufthansa kwuru na nkwupụta niile dị n'ime na ndị ọrụ ga-abụkwa "oke nwoke na nwoke".
Ndị njem ụgbọ elu na-abanye a Lufthansa flightgba ụgbọ elu n'ọdịnihu dị nso agaghị anụkwa "Meine Damen und Herren" ma ọ bụ "ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị," onye na-ekwuchitere ụgbọ elu ahụ kwupụtara taa.
Lufthansa ga - echi “ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị” ọdịnala ndị ahụ ekele maka ndị njem iji kwado nnọpụiche nwoke na nwanyị dịka 'ndị ọbịa bịara abịa,' ma ọ bụ 'ụtụtụ na mgbede.'
Lufthansa bụ onye kachasị ụgbọ elu ụgbọ elu kachasị ọhụrụ ịkpọsa 'mgbanwe' dị otú ahụ Air Canada na Japan Airlines.
Ọzọkwa, a ga-enye ndị njem njem ụgbọ mmiri nke Lufthansa nhọrọ nwoke na nwanyị nke atọ n'oge usoro ntinye akwụkwọ, n'akụkụ "nwoke" na "nwanyị".
A ga-eji nwayọ nwayọ wee gbanwee mgbanwe a na ụgbọ elu Lufthansa, yana ụgbọ elu ndị Switzerland, Austrian, Brussels na Eurowings, ndị bụ enyemaka nke Lufthansa.
Fttù Lfthansa kwuru na mgbanwe a bụ nzaghachi na "mkparịta ụka nke a na-eme na ọha mmadụ" gbasara okike, wee si n'ọchịchọ "ịkwanyere ndị ọbịa niile nọ n'ụgbọ a ugwu."
Agbanyeghị na ekwuputara taa, mgbanwe a adịla n'ọrụ ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ otu ọnwa. Otu ọnụ na-ekwuchitere Lufthansa kwuru na June na nkwukọrịta niile nke ime na ndị ọrụ ga-eme ka "ịkwa nhatanha nwoke na nwanyị" kwa.
Air Canada bụ ụgbọ elu mbụ kwụsịrị ụkpụrụ omume ọdịnala maka nghọta nke oge a mgbe ọ nọchiri "ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị" na "onye ọ bụla" azụ na 2019. Dị ka Lufthansa, ọ kpọbatara nhọrọ okike nke atọ na saịtị ntinye akwụkwọ ya.
Ndị ụgbọ elu Japan gbasoro na 2020, mana ọ bụ naanị gbanwere mgbanwe ahụ na ọkwa ya n'asụsụ Bekee. Ọ bụghị naanị na ndị Japan anaghị anabata ịmụrụ anya nke ụdị ọdịda anyanwụ (ịlụ nwoke na nwanyị, dịka ọmụmaatụ, ezighi ezi ebe ahụ), ekele ndị Japan na-ejikarị eme ihe na-anọpụ iche.